बन्चरो प्रहार गरी आमाको हत्या- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
बन्चरो प्रहार गरी आमाको हत्या
भाद्र २९, २०७७ अर्जुन राजवंशी
बिर्तामोड — बन्चरो प्रहार गरी झापाको कमल गाउँपालिका–७ ठूलो बाह्रघरेमा एक युवकले आमाको हत्या गरेका छन् ।
आइतबार राति ८ बजेतिर ठूलो बाह्रघरेका २४ वर्षीय दिनेश ऋषिदेवले आमा ५० वर्षीया मिराको हत्या गरेका हुन् । मादक पदार्थ सेवन गरेका दिनेश र आमा मिराबीच झगडा भएको प्रहरीले बताएको छ ।
झगडा गर्ने क्रममा दिनेशले घरमा रहेको बन्चरो र ढुंगाले टाउको र खुट्टामा प्रहार गर्दा आमा मिराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिए । दिनेशलाई तत्कालै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०७:४८
एसिड दुरूपयोग रोक्न दुई अध्यादेश आउँदै
भाद्र २९, २०७७ मातृका दाहाल
खरिदबिक्री कसरी हुन्छ ?
कस्तो छ कारबाही व्यवस्था ?
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०७:३६